Shir-Cilmiyeed ku saabsan hal-abuurka iyo horumarinta ganacsiga oo Muqdisho lagu qabtay – SAWIRRO – Radio Muqdisho
Shir-Cilmiyeed ku saabsan hal-abuurka iyo horumarinta ganacsiga oo Muqdisho lagu qabtay – SAWIRRO
Jaamacadda SIMAD ayaa maanta qabatay shir-cilmiyeed ku saabsan ganacsiga iyo hal-abuurka(Entrepreneurship) oo ay ka qeyb galeen cilmi-baareyaal, ganacsato iyo masuuliyiin ka socotay qeybaha bulshada.
Shirkaan ujeedkiisu waxa uu ahaa in lagu soo bandhigo cilmi-baaris ay aqoonyahanno Soomaaliyeed ku sameeyeen caqabadaha horyaalla ganacsiga Soomaaliya iyo sida xal loogu heli karo. Sidoo kale cilmi baareyaasha ayaa ka hadlay fursadaha ganacsi ee dalka Soomaaliya yaala.
Waxaa kulankaas intii uu socday hadalo ka jeediyay qaar ka mid ah ganacsatadii ka soo qayb gashay oo iyagu ku dheeraaday ka hadalka waxyaabaha sababa in ganacsiga yar yarka ah ee ay abuuraan Ganacsato Soomaaliyeed uu bur buro isagoo aan waqti dheer sii jirin iyo sida xalku ku jiro oo ganacsatada loo dhiiri gelin karo.
“Waxyaabaha Sababa in ganacsiyo badan oo mawaadiniin Soomaaliyeed ay furteen ay bur buraan ama niyad jabka ku keena ganacsatada waxaa ka mid ah dadkeenu inta badan waxay sameeyaan ganacsi isku eg oo lasoo minguuriyay intooda badan” ayuu yiri Axmed Cali Suldaan oo ah ganacsade iyo macallin ka tirsan jaamacadda SIMAD.
“Ganacsiga sida hadda ku dhacday ganacsiyada qaar in ganacsadaha waxii uu keeno laga daba keeno niyad jab ayay ku keneysaa waxaana looga gudbi karaa in dulqaad ay u yeeshaan ganacsatadu marka ay bilaabayaan howsha ganacsiga “ayuu sii raaciyay Suldaan.
Gudoomiyaha jaamacadda SIMAD Daahir Xasan Cabdi Daahir Carab oo hadal ka jeediyay kulankaas ayaa waxa uu sheegay in kulankani uu noqon doono sanadle ay jaamacaddu hormuud ka tahay isla markana ay ku dadaali doonto in gobollada dalka oo dhan ay gaarsiiso.
“Insha alaah kulankani waxaa uu noqon doonaa mid sanadle ah oo sanad walba la qabto isagoo intaan ka sii balaaran kani waa kii koowaad waxaan gaarsiin doonaa gobollada dalka oo dhan si ganacsiga dalkeenu heer u gaaro”ayuu yiri Daahir Carab.
Shirkaan ayaa loogu talo galay in bahda waxbarashada iyo ganacsatada ay isku dhaafsadaan aragtiyada la xiriira ganacsiga iyo caqadaha ku imaan kara, ayadoo cilmi-baareyaal badan ay soo bandhigeen sababaha keena in ganacsigu uu guul darreysto, taas oo ay sabab u tahay arrimo ay ka mid yihiin in maalgeliyeyaashu ay hal ganacsi wada qaataan.
Saraakiil ka tirsan Ciidanka Xoogga dalka oo maanta tababar loo soo xiray
"Sawirro"Madaxweynaha oo furay shirka wada_tashiga dowlada dhexe iyo dowlad goboleedyada